Seranan-tsambon’i Toamasina: vita ny 25%-n’ny asa fanitarana | NewsMada
Seranan-tsambon’i Toamasina: vita ny 25%-n’ny asa fanitarana
Mandeha, araka ny tokony ho izy, ny asa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Tanjona, ny ahafahany mandray sambo vaventy sy hitomboan’ny isany afaka miantsona.
Nanomboka ny volana avrily 2018, ny asa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, tohanan’ny Fandaharanasa japoney Jica. Nambaran’ny tompon’andraikitry ny orinasa mitantanana ny seranan-tsambon’i Toamasina (Spat) sy ny manao ny asa, ny orinasa Penta sy ny Dahio, fa efa vita hatrany amin’ny 25% ny asa.
Mizara roa amin’ny ankapobeny ny asa. Andiany voalohany, ny fanotofana ny ranomasina, sy ny fanamboarana ny bolongana “béton” (dolos), tombanana ho vita amin’ny faramparan’ny taona 2020. Miteraka asa 300 ho an’ny mponin’i Toamasina ity asa ity.
Andiany faharoa, ny fametrahana ireo “dolos” manamorona ny sisin-dranomasina.
Mahatratra 10 ha ny velarana ranomasina hototofana, hatao fitahirizana kaontenera, vinavinaina ho vita amin’ny taona 2022. Mialoha izany, nanajary velarana 5 ha ny Spat, avy amin’ny heriny madiodio, efa andalam-pahavitana, nampanaovina orinasa Colas.
Handraisana ny sambo vaventy
Ao anatin’ny andiany faharoa koa ny fanamboarana toeram-piantsonan’ny sambo vaovao mirefy 470 m, manana halalin-drano 16 metatra. Halalinina ho lasa 16 m koa ireo toeram-piantsonana teo aloha, ny C1 sy C2, ary ho 14 m ny C3. Tanjona ny ahafahan’ireo toerana ireo hiantsonan’ny sambo vaventy sy hampitombo ny sambo afaka miantsona.
Mitentina 639 tapitrisa dolara ity asa fanitarana ny seranan’i Toamasina ity, anisan’ny fampiasam-bola goavana indrindra eto Madagasikara. Mampiavaka ity tetikasa ity ny fisian’ny vaomiera miady amin’ny kolikoly mba ho mangarahara avokoa ny asa atao, toy ny fanomezana ny tolo-bidy sy ny tolo-barotra, ny fandraisana mpiasa, sns. Eo koa ny vaomiera misahana ny tontolo iainana, manara-maso ny fiantraikan’ny asa amin’ny lafiny tontolo iainana. Misy ny firaiketana an-tsoratra hifandraisana mivantana amin’ny mponina hampandre ny tompon’andraikitry ny asa, raha sendra mahita trangan-javatra mikasika ny asa.